Iwo ekutanga 60 satellites eiyo Elon Musk chirongwa chave kutenderera | Linux Vakapindwa muropa
Iwo ekutanga 60 satellites eiyo Elon Musk chirongwa chatova munzira
Satellite kuendeswa kwe Starlink Constellation (Chirongwa chaElon Musk chekupa yakakwira-mhanya Internet kubva munzvimbo yakatenderera pasirese) zvakatanga iri China. NeChina manheru SpaceX yakatanga yavo yekutanga makumi matanhatu emasaiti satellites mune yakaderera Earth orbit. Sekuziviswa kwaElon Musk, ma satellite matanhatu makumi matanhatu akabhururuka achienda muchadenga akakwira roketi reFalcon 60 kubva kuCape Kanaveral Air Force Base muFlorida, USA
Mushure memamwe matambudziko ehunyanzvi uye emamiriro ekunze akanonoka kuvhurwa kwesvondo rapfuura, SpaceX yakazopedzisira yaisa satellites ayo ekutanga e60 Sarlink munzira.
Mushure mekutumira paTwitter svondo rapfuura pikicha yemasaiti padombo reFalcon 9, Musk akazivisa kuti vanozotangwa muna Chivabvu 15.
Asi SpaceX yakanonoka kuvhurwa kwemaawa makumi maviri nemana kwekutanga, nekuda kwemamiriro ekunze asina kukodzera uye kechipiri kumatambudziko ane chekuita nekombuta.
ari Masetellita makumi matanhatu anorema angangoita 60 kilograms mumwe nemumwe akazvikanda ivo vatova pasi yepasi orbit.
1 Uku kungori kutanga
1.1 Elon Musk ane hurongwa hweMars
Uku kungori kutanga
Musk uye SpaceX vakatsanangura kuti, zvakanyanya, ma satellite e60 haana kumiririra zvakawanda kwechinguva. Maererano navo, zvichave zvakafanira kumirira dzinenge nhanhatu dzekuwedzera (angangoita mazana mana emasaiti) kupa shoma Internet service.
SpaceX yakatiwo ringave rimwe zuva kuona kana ma satellite ese akatumirwa ari kushanda nemazvo.
Uyewo, Musk akataura mubvunzurudzo svondo rapfuura kuti panodiwa gumi nembiri mapango. iine mubhadharo wakafanana kuti uve nechokwadi chekubvumidzwa kweinternet munyika zhinji pasi rese.
Parizvino, Starlink inobvumidzwa chete mashandiro muUnited States. Izvo zvakati, vavariro dzaElon Musk dzinopfuura nekungopa Broadband internet pasirese.
Elon Musk ane hurongwa hweMars
Kuburikidza ne Starlink, iyo CEO weTesla uye yakavanzika space rocket kambani SpaceX ivo vanoda kuunganidza mari inodiwa yekuona kwako nzvimbo, kunyanya iyo yekukoloni nyika Mars.
Muchokwadi, mukukurukurirana kwake parunhare nevatori venhau vakataurwa neCNBC svondo rapfuura, Elon Musk akati anoona Starlink seyechokwadi mari yezvembiru kune ako anotevera mafambiro muchadenga uye paMars kunyanya.
Mukuru weTesla ari kuverenga pamusoro pezvakawanikwa kubva muchirongwa ichi kuti awane mari yekuona kwake kweMars.
Iyi mari inobvumidza iyo kuti iite zviwanikwa zviwande kune SpaceX. kupedzisa roketi yavo yemhando nyowani iri kuvandudzwa uye ichatumidzwa kunzi Starship, chombo chitsva chekutakura vanobhadhara vatengi kuMwedzi uye pamwe nekuyedza kuita Mars.
Mune mamwe mazwi, Starship ndiyo nyowani inogadziriswazve kuvhurika sisitimu. iyo SpaceX parizvino iri kusimukira.
Chikwata chengarava chinofanira kutakura kusvika kuvanhu zana panguva kubva paPasi kuenda kuMwedzi kana nyika Mars.
“Isu tinoona iyi senzira iyo SpaceX inogona kuburitsa mari iyo inogona kushandiswa kugadzira maroketi akawanda uye spacecraft. Tinotenda kuti tinogona kushandisa mari yaStarlink kutsigira Starship, "Elon Musk akaudza vatori venhau svondo rapfuura.
Mari inokwanisika kubva kumabasa ekutanga kweStarlink inotarisirwa kunge ichitenderedza € 3.000 bhiriyoni (€ 2.600 bhiriyoni) pagore, fungidziro inogona kuvepo kunyangwe Starlink ichigere kunyoresa vatengi.
Panguva ino, Elon Musk akaudza vatori venhau kuti Starlink haina vatengi zvakadaro, nekuti anofunga kuti zvingave zvirinani kuve nekunzwisisa kwakanaka kwechirongwa. Akataura izvozvo, zvakadaro, SpaceX yaida kusaina nevatengesi vezvekufona uye zvakare nehurumende.
SpaceX ingangotanga kutengesa kubatanidza gare gare gore rino kana kutanga kwainotevera, kana zvese zvikafamba sekuronga.
Nekudaro, ngatirege kukanganwa kukwikwidza. Kunyangwe paine chokwadi chekuti ma satellite e60 Elon Musk Starlink anozopa anokwanisa kushandisa Broadband kugona, ndokuti simba rinobatsira kubva kunetiweki ye Starlink pamusoro peiyo geostationary telecommunication satellite parizvino iri munzira uye ichanyanya kukunda chero imwe.
Vanogona kukwikwidza neSpaceX vanosanganisira makambani eCanada Telesat neLeoSat, iyo inorongawo kuendesa ngarava dzinosvika mazana matatu ema satellites ane simba rinokwanisika rematabheti masere mumakore mashoma anotevera, uye OneWeb, yakatsigirwa neAirbus SE, iyo yakatanga iyo yayo satellite network muna Kukadzi gore rino.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Iwo ekutanga 60 satellites eiyo Elon Musk chirongwa chatova munzira
Ungachinja sei zita remuchina muLinux kubva kune iyo terminal
TAILS 3.14 - Iine zvigadziriso zveazvino Intel kusagadzikana